नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसीको अध्यक्षमा डाक्टर सिलवाल निर्वाचित
मुख्य पृष्ठसमाचारनेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसीको अध्यक्षमा डाक्टर सिलवाल निर्वाचित
विराटनगर । नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसीको अध्यक्षमा डाक्टर फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित भएका छन् । डाक्टर कैलाशकुमार श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै सिलवाल दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
निर्वाचित भएका डाक्टर सिलवालले ३६१ मत ल्याएका छन् । अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर श्रेष्ठले २७१ मत ल्याएका छन् ।
नयाँ नेतृत्वका लागि आइतबार र सोमबार निर्वाचन भएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डाक्टर सञ्जिवकुमार ठाकुर, उपाध्यक्षमा डाक्टर यज्ञराज खरेल, महासचिवमा डाक्टर राजेन्द्र चौधरी, सहसचिवमा डाक्टर सुनिल रेग्मी र कोषाध्यक्षमा डाक्टर सुधिर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सहकोषाध्यक्षमा जुविन सिलवाल निर्वाचित भएका छन् ।
सदस्यहरुमा डा.अन्जु देव, डा.अमरकुमार यादव, डा. प्रेरण दाहाल, डा.पार्थ गुरागाईं, डा.अमरेन्द्रकुमार महतो र रोशन खड्का निर्वाचित भएका छन् ।
नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचित भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ र सदस्य खड्का डाक्टर कैलाश श्रेष्ठ प्यानलबाट उम्मेद्वार बनेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले ३ सय १८ मतसहित विजयी हुँदा डाक्टर नविन कर्णले ३ सय २ मत ल्याएका थिए ।
उपाध्यक्षमा खरेलले ३ सय २२ मत ल्याएर विजय भए । उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा बालकृष्ण साह २ सय ९७ मत ल्याए ।
महासचिवमा राजेन्द्र चौधरीले ३ सय ५१ मत ल्याएर विजय हुँदा रविनराज सिंहले २ सय ७५ मत ल्याएका थिए । कोषाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहका डा. सुधिर श्रेष्ठले ३ सय १० मतसहित निर्वाचित हुँदा डा. सिलवन्तसेन श्रीवास्तवले ३ सय ६ मत ल्याएका थिए ।
सहकोषाध्यक्षमा डा. जुविन सिलवालले ३ सय ८० मत ल्याए । सहकोषाध्यक्षका उम्मेदवार डा. सरवेसकुमार झाले २ सय ४८ मत ल्याएका थिए ।
सदस्यमा डा. अन्जु देव ३ सय ९३, डा. प्रेरणा दाहाल ३ सय ५०, डा. अम्रेन्द्र महतो ३ सय ३१, डा. अमरकुमार यादव ३ सय २५, डा. पार्थ गुरागाइँ ३ सय २५, डा. रोशन खडका ३ सय १७ मत ल्याएका थिए ।